Oggolaanshaha Kahor Farmashiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Ogolaansho hore > Oggolaanshaha Kahor Farmashiyaha
Oggolaanshaha Kahor Farmashiyaha
Tilmaamaha dawada ee la qoray iyo farmashiyaha
Dawooyin kasta oo aan ku liis-qornayn dawladeena waxay u baahan tahay oggolaansho hore. Daawooyinka is-maamul ee u baahan oggolaansho hore, fadlan kala xiriir Qoraallada Degdegga ah cinwaanka 1-844-605-8168 ama isticmaali booqo website si loo bilaabo hawsha oggolaanshaha hore.
Foomamka iyo Farmashiyeyaasha
2022 Formularies iyo Farmashiyeyaasha
Qaab -dhismeedka Heerka 1 -aad ee Raadinta Online -ka (Qorshaha Labada Maalmood ee MA) - soo socda ugu dhaqsaha badan
Qaaciddada Tier 1 Ingiriis iyo Isbaanish isku dhafan (MA Dual Plan)
Tier 5 Foomamka Raadinta ee Online -ka (Qorshayaasha MA 1, 2, 3, 4) - soo socda ugu dhaqsaha badan
Qaaciddada Tier 5 Ingiriis iyo Isbaanish isku dhafan (MA Qorshooyinka 1, 2, 3, 4)
Tusaha Farmashiyaha - Qorshaha Labada (MA Laba Qorshe)
Buugga Farmasiga (Qorshayaasha MA 1, 2, 3, 4)
🡻 Guji si aad u ballaariso 2021 Formularies iyo Farmashiyeyaasha
Eeg 2021 Formularies iyo Farmashiyeyaasha
Tier 1 Qaaciidooyinka Khadka Tooska ah ee Internetka (MA Laba Qorshe)
Tier 5 Qaaciidooyinka Khadka Tooska ah ee Internetka (Qorshayaasha MA 1, 2, 3, 4)
Buugga Farmasiga (MA Laba Qorshe)
Talaalada covid19: Tallaalada Pfizer BioNTech, Moderna, iyo Johnson & Johnson COVID-19 ayaa lagu daboolay qeyb ka mid ah ka faa'iideysiga daawooyinka ee ku jira Qorshooyinka 1, 2, 3, 4 iyo Dual Plan (SNP) meel kasta oo la bixiyo.
Ogolaanshaha Hore & Shuruudaha Daaweynta Talaabada
2022 Shuruudaha Oggolaanshaha Hore Oo Dhawaan Soo Socda
2021 Shuruudaha Ogolaanshaha Hore
Ma jiro Shuruudaha Daaweynta Tallaabada ee lagu dabaqi karo waqtigan 2022 Cusboonaysiinta Goor dhow
Foomamka Farmashiyaha, Barnaamijyada, iyo Xeerarka
Barnaamijka Maareynta Daaweynta Daawada
Sida loo Codsado Ka-Reebitaannada Caymiska, Go'aamada, iyo Dib-u-go'aaminta
Foomka Caymiska Daawada Daawada
Qorshee Siyaasadda Kala-guurka | Español
Dawooyinka Si Xirfad Leh Loo Maamulay
CHPW waxay ubaahantahay ogolaansho hore ee daawooyinka qaarkood ee sida xirfada leh loo maamulo. mcg tilmaamaha waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo baahida caafimaad ee maqnaanshaha Shuruudaha Caymiska Caafimaadka ee CHPW. Waxaad dib u eegi kartaa tilmaamaha maaraynta isticmaalkayaga iyo siyaasadaha faa'iidooyinka daroogada caafimaad adoo booqanaya Bogga Oggolaanshaha hore.
Xaddidyada Daawooyinka Opioid ee CMS
Laga bilaabo Janaayo 1, 2019, waxaa jira xadadyo dheeraad ah oo ku saabsan dawooyinka opioid ee xubnaha haysta Medicare Qaybta D. Isbeddelkan wuxuu raacaa tilmaamaha Xarumaha Adeegyada Medicare & Medicaid (CMS).
Xubnaha buuxinaya warqad dhakhtar qorid markii ugu horeysay ee opioids si loogu daaweeyo xanuunka daran ma awoodi doonaan inay helaan wax ka badan toddobo maalmood oo sahay ah hal mar.
Farmashiistayaasha ayaa looga baahan doonaa inay kala tashadaan dhakhtarka kuu qoro daawooyinka opioid-ka oo ka badan 90 daawo u dhiganta morphine (MME) maalintii.
Xuduudahaani ma khuseeyaan xubnaha kuwaas oo:
Ku noolow xarun daryeel muddo-dheer ah.
Aad ku jirtid cisbitaalka oo aad heleyso daryeel-caafimaadeed oo dhammaad ah.
Waxaa lagaa daaweynayaa xanuunka firfircoon ee kansarka la xiriira.
Miyaa loo qoraa buprenorphine alaabooyin loogu talagalay daaweynta kaalmada caafimaad (MAT).
Kormeer dheeraad ah
CMS waxay ku talineysaa kormeer dheeraad ah iyo kormeerida daawada opioid si wax looga qabto isbeddelada hadda jira iyo welwelka amniga. Dib u eegista daawada waxay sababi kartaa in xubin loo qoro hal farmashiye iyo hal macmiil oo loogu talagalay walxaha la kontoroolo si loo wanaajiyo daryeelka iyo maaraynta kiisaska.
Si aad u akhrido wax badan oo ku saabsan cusboonaysiinta rijeetada ee opioid ee xubnaha Medicare Part D wax ku oolka ah 2019, fadlan fiiri Xaashida Xaqiiqda CMS: Hagaajinta Xakamaynta Dib -u -eegista Isticmaalka Daroogada.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Oktoobar 13, 2021